नेपाल आइडल–३ को उपाधि जितेपछि सज्जा चौलागाईँ चर्चा एकाएक चुलिएको छ । विजेता भएसँगै उनले ५ लाख नगद पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी छन् । मोरङ पथरीकी सज्जा अहिले काठमाडौंमा बसेर संगीत साधनामा तल्लीन छिन् । नेपाल आइडलको अडिसनदेखि धमाकेदार प्रस्तुति दिएर दर्शकको मन जितेकी सज्जाले अन्ततः नेपालको पहिलो महिला नेपाल आइडल बनेर रेकर्ड राखेकी छन् । उनको नेपाल आइडल अनुभव, विजेता बन्नुअघिको संघर्ष र भावी योजनाबारे गरिएको कुराकानी :
अहिले कस्तो लागिरहेको छ ? नतिजा घोषणा हुनुअघि जित्छु भन्ने लागेको थियो ?
के भन्ने खै, शब्द भेट्टाएकी छैन । अत्यन्तै खुसी लागेको छ । खुसीसँगै जिम्मेवारी थपिएको महसुस पनि गरिरहेकी छु । यति बेला म ती दर्शक र फ्यानहरूलाई सम्झिरहेकी छु जो दिनरात नभनी मेरा लागि भोटिङ गरिरहेका हुन्थे । उहाँहरूले बिनास्वास्र्थ माया गरेर मलाई आज यहाँसम्म पुर्‍याउनुभयो । म नै विजेता हुन्छु भन्ने त थिएन तर कहीँ कतै म पनि के कम छु र भन्नेचाहिँ लाग्थ्यो । आफूले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रम घरमा गएर दोहोर्‍याएर हेर्थें । एक किसिमले राम्रै गरिरहेको छु भन्ने लाग्थ्यो । मैले मेहनत पनि उत्तिकै गरेकी थिएँ ।
नतिजा घोषणा हुने समयमा निकै डर लागेको थियो । के हुने हो ? भोट कति आएको छ होला जस्तो लाग्थ्यो । भाइ र म बसेर टीभी हेरिरहेका थियांै । विजेतामा मेरो नाम आउनासाथ म स्पिचलेस भएँ । एउटा सपना पूरा भयो भन्ने लाग्यो । हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने लाग्यो । मेहनत गर्दा असम्भव केही छैन भन्ने लागिरहेछ । मोरङका साथीहरू, गोकर्णेश्वर र कालिञ्चोकका दर्शकले विशेष सहयोग गर्नुभयो ।
आमाबुवाको प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?
नेपाल आइडलको रिजल्ट घोषणा हुनासाथ मलाई अति धेरै फोन आइरहेको थियो । सबैले बधाई दिइरहनुभएको थियो । उहाँहरूसँग के बोल्ने के भन्ने अलमलमा थिएँ । मेरो बुवा मोरङमा हुनुहुन्छ । आमा विदेशमा हुनुहुन्छ । म र भाइ गोकर्णेश्वरमा बस्छौं । उहाँहरूले अति खुसी भएर फोन गर्नुभयो । राम्रो गर्‍यौ नानी, इज्जत कमायौ, अझ अगाडि बढ्नू भन्नुभयो । परिवारको साथले नै यहाँसम्म पुगेकी हुँ । खुसीको समय परिवारको साथमा नहुँदा केही नमज्जा पनि भयो । कोरोना संक्रमणको डरले ग्रान्ड फिनाले पनि सञ्चालन हुन सकेन । केही दुःख त पक्कै लाग्यो । तर, अहिलेको समय र परिस्थिति हेर्दा दुःख मान्ने अवस्था पनि छैन ।
नेपाल आइडलको मञ्चलाई कसरी सम्झने ?
नेपाल आइडल मेरो घर हो जसले मलाई नौलो परिचय र अगाडि बढ्ने प्लेटफर्म दियो । यो कार्यक्रमप्रति सधैं आभारी छु । जति नै प्रशंसा गरे पनि कमी हुन्छ । हामीजस्तो योङ जेनेरेसनलाई अगाडि बढ्न निकै गाह्रो छ । एक्लै संघर्ष गरेर उचाइमा पुग्न समय लाग्थ्यो । तर एक वर्षको मेहनत र लगावले छुट्टै उचाइ टेक्न पाएँ । नेपाली संगीतमा आउन खोज्नेका लागि नेपाल आइडल एउटा दरिलो खम्बा हो । यहाँ सिकेका सीप र क्षमता जीवनभर काम लाग्छन् । साँच्चिकै क्षमता हुनेका लागि सही प्लेटफर्म हो यो ।
तपाईंलाई केले विजेता बनायो ?
मुख्य कुरा त दर्शकको माया र सद्भावले नै मैले जितेकी हुँ । मेरो गायकीलाई मन पराइदिनुभयो । स्वर सुनिदिनुभयो र मलाई विश्वास गरिदिनुभयो । मोरङवासी, गोकर्णेश्वर, नारायणचौरका दर्शकले औधी माया गर्नुभयो । यसका लागि त जति नै आभार व्यक्त गरे पनि पुग्दैन । म नयाँनयाँ प्रस्तुतिमार्फत उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु । म मनैदेखि गायनमा लागेकी हुँ । अन्य पेसामा पनि काम गरेँ तर रमाउनै सकिनँ । म गीत गाउनकै लागि जन्मेकी हुँ जस्तो लाग्छ । त्यसैले पनि परिपक्व र पर्फेक्ट गाउन मेहनत गरेँ । रातरातभर नसुतेर रियाज गर्थें, प्राक्टिस गर्थें । यो सबैको फल हो नेपाल आइडलको उपाधि ।
अब कस्ता गीत गाउने योजना छ ?
मलाई जहिले पनि नयाँ एक्स्पेरिमेन्ट गर्न मन लाग्छ । म पप रक जनराबाट आएकी हुँ । ‘गिग’ गाएरै मेरो गायन यात्रा सुरु भएको हो । तर आइडलमा मैले सबै प्रकारका गीत गाएँ । कहिले लोक, कहिले आधुनिक त कहिले शान्ति गीतमा पनि स्वर दिएँ । अब अलि फरक ट्रेन्डको गीत गाउन चाहन्छु । नयाँ छु । कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने डर पनि छ मसँग । धेरै योजना बनाउन भ्याएकी छैन । सज्जाको बेग्लै लय, स्वर, भाका ल्याउन मन छ मलाई ।